नेपाल पक्षका ७ सांसदले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत ! « Bagmati Online
नेपाल पक्षका ७ सांसदले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका आठ जना सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको थियो ।
संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विसुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर छन् । आठ मध्ये बुढा, शाही र केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । सांसद कलिला खातुन भने केही समय बैठक स्थलमा गएर फर्किएकी थिइन् ।
विश्वासको मत नपाए मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले आदेश दिए आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अस्थिरताका लागि नभइ स्थिरताका लागि विश्वासको मत मागेको बताएका छन् । ‘यो संसदले सुविचारित ढंगले निर्णय गरोस् । संसदले विश्वास गर्दैन भने मैले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ’, ओलीले भने ।
सरकारलाई काम गर्न नदिने र विकल्प पनि नदिने प्रयत्नका विरुद्ध आफू विकल्प बोकेर आएको बताए । ‘अढाई महिनादेखि मेरो विरोध भएको देख्छु तर विकल्पमा कोही आउँदैन । विरोध गरेको छ विकल्प दिएको छैन । म राजीनामा गर्थे नि, बहुमत छ आफूसंग कसरी राजीनामा दिनु ? मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि मात्रै समर्थन फिर्ता गरियो’, ओलीले भने ।
अध्यादेशबाट देश चलायो भन्ने आरोपको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । ‘अध्यादेश संवैधानिक विषय हो । संसदलाई आवश्यक लागेन भने भोलि फेल गरे भैगो नि’, ओलीले भने । संसद विघटनको लागि बाटो बनाएको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शंका लागेको भए विश्वासको मत दिएर संसद विघटनको प्रयास असफल बनाउन ओलीले आग्रह गरे ।